LibreOffice 7.0 inogona kuyedzwa muna Chivabvu 11 uye nezvinhu izvi zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 7.0 inogona kuyedzwa muna Chivabvu 11 uye ichasvika iine zvinhu izvi zvitsva
Iyo Gwaro Foundation inotanga kudziisa injini. Kunyangwe iyo yechitanhatu vhezheni yehofisi yako suite ichiri kugashira zvimwe zvinyorwa, ivo vari kutogadzirira zvese zvekutanga kwe LibreOffice 7.0, chitsva chakakosha chikamu chichauya nemabasa matsva mune zvese mashandisirwo ayo uye kugadzirisa mashandiro, imwe yacho zvakare ine chekuita nekuchengetedza nekubvisa tekinoroji isingachashandi yeFlash Player. Uye, mushure mekuramba zvishoma, kunyangwe Adobe ichasiya zvachose rutsigiro rwayo pakupera kwa2020.
Sezvatinoverenga mutsamba inodzidzisa rakabudiswa maawa mashoma apfuura, Iyo Gwaro Foundation ichatibvumidza kuyedza LibreOffice 7.0 kubva Chivabvu 11, iro zuva ravachabatawo yavo yekutanga Bug Hunting Session, yemubvunzo nemhinduro chikamu chine chekuita nemiedzo yakaitwa mune inotevera vhezheni yeLibreOffice. Yekutanga Alpha vhezheni ichaiswa kune pre-kuburitsa server, iyo yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link, mazuva mashoma apfuura, asi ivo havana kufambira mberi izuva ripi chaizvo.
1 LibreOffice 7.0 ichauya nezvinhu izvi zvitsva
2 Inowanikwa kubva muna Nyamavhuvhu
LibreOffice 7.0 ichauya nezvinhu izvi zvitsva
Kunyangwe Iyo Gwaro Siseko ichivimbisa kuti ivo vacharamba vachiwedzera zvimwe shanduko mu Wiki yakeLibreOffice 7.0 yatove nezvinhu izvi zvitsva zvakasimbiswa:
Yakagadziriswa padded manhamba muWhitter zvinyorwa.
Itsva uye akachinja mashandiro muCalc maspredishiti.Kuita kana uchivhura mafaera eXLSX kwakagadziridzwawo.
MuImpress uye Dhirowa, zvinyorwa zvacho zvadzokera kune yakasarudzika 8%, otomatiki kumisikidza masuper / zvinyorwa mumabhokisi ezvinyorwa akagadziriswa, uye kumisikidzwa kwemabhokisi emavara ane auto-kugadzirisa zvinyorwa akagadziriswa. Kugadziridza kwekuita kuchasanganisirwa izvo zvichadudzira mukumhanyisa kumhanya.
Macro masigine izvozvi zvinoongororwa mugwaro kurodha kernel.
Kune manhamba emhando, nzvimbo yazvino inozotariswa yedesimali uye zviuru zvakapatsanurwa, semuenzaniso, 1.234,321 muDeDE inova 1234, nepo 1,234.321 mune en_UK locale inopa mhedzisiro imwechete.
Raibhurari yepasi yeCairo chati yakatsiviwa naSkia.
Zvakawanda zvakagadziriswa muVanyori Navigator:
Zvikwata zveNavigator zvakasungwa kunze kana vasina zvinhu (zvakafanana zveCalc Navigator).
Zvese zvinhu zviri muNavigator (misoro, matafura, mafuremu, mifananidzo, nezvimwewo) zvine yavo yemukati menyu zvinhu zvakaita seGo ku, Hora, Delete, Reazve zita.
Misoro muNavigator ine mamiriro ezvinhu emenyu kubva kuKusimudzira / Kudzikisa chitsauko.
Tafura yemamiriro ezvinhu menyu muNavigator ikozvino yaisa Chinyorwa Chemusoro.
Mutsara wekutevera wawedzerwa pamisoro mubrowser. Inogona kuve mumatatu matatu: Default, Focus, Off. Iwe unofanirwa kudzvanya mbeva munzvimbo dzinoverengeka mune rakakura zvinyorwa zvinyorwa nemisoro yakawanda. Isu tichaona kuti misoro muNavigator ichasarudzika otomatiki zvinoenderana nechinzvimbo cheye karavara.
Iyo yekushandisa yekushandisa bhokisi rakatsiviwa neicho chinhu kufamba kwekutonga.
Wakawedzera tooltip hunhu uye kuverenga mazwi kubva kuNavigator chikamu.
Mapeji matsva erubatsiro rwezvivakwa uye tangazve LibreOffice Basic kuzivisa, pamwe nechinhu cheEr VBA. Basic syntax madhayagiramu anotanga kuverengerwa mumapeji ekubatsira.
Kugadziridzwa kwekupinza / kutumira kunze kweDOCX, PPTX uye PPT mafirita.
Mifananidzo inopa kuvandudza.
Kugadziridza mushandisi yemukati:
Mabhawa ese akavharirwa nekutadza pane matsva profiles.
Iyo nyowani Sukapura icon theme yakawedzerwa, iyo inozoshandiswa nekutadza pane macOS.
Kupusa kusingakoshi kwemagwaro achangoburwa uye matemplate muKutanga Center kwagadziriswa.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwemutauro, kusanganisira shanduro nyowani.
Tsigiro yekurongedza inopesana neyakaora CPython 2.7 yabviswa, uye zvinyorwa zvino zvinogara zvichimhanya pane iyo CPython 3 kernel.
Tsigiro ye JFW_PLUGIN_DO_NOT_CHECK_ACCESSIBILITY y JFW_PLUGIN_FORCE_ACCESSIBILITY.
Yakabvisa iyo Macromedia Flash kutumira kunze firita.
Inowanikwa kubva muna Nyamavhuvhu
Sezvo isu tichigona kuverenga mukati nzira yako yemugwagwa, LibreOffice 7.0 ichave yakaburitswa svondo raAugust 3-9. Kusvika panguva iyoyo, vasingashiviriri vanokwanisa kuyedza vhezheni nyowani kubva kune-pre-kuburitsa server iyo yatakapa pakutanga kwechinyorwa chino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.0 inogona kuyedzwa muna Chivabvu 11 uye ichasvika iine zvinhu izvi zvitsva
Zvinenge zvisina huso hwakanaka kusimudza ...
European Union inogadzirisa muayo EDPB pama cookies